Socdaalkeygii Woqooyiga – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Afraad: Qalinkii Yuusuf Garaa | Haldoor News
Socdaalkeygii Woqooyiga – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Afraad: Qalinkii Yuusuf Garaa
Dulmi badan oo Soomaali ay u geystay Soomaali kale ayaan arkay. Rag aan qaarkood Taxanahan uga warrami doono ayaan ku kala bartay – dhinac wanaagsan iyo dhinac gurracanba. Khibradda aan socdaalkaas ka helay ayaa aakhirkii qeybta ugu weyn ka qaatay go’aanka aan ii fudueyn ee ahaa in aan dalkeyga ka haajiro.
Xamar markii aan joogay intaa dadku, ayaga oo ka xun waxay ka hadli jireen warar dhiillo leh oo ka dhacay Burco iyo Hargeysa. Hadallo aad mid walba la yaabto oo kolley run iyo been isugu jiri karay. Laakiin wax kasta oo aan hore u maqlay iyo cid aan hore isu aragnay marnaba oo ma jirin oo ii diyaarin kartay waxa aan la kulmay markii aan tegey Berbera, Hargeysa, Burco iyo Borame.
Ujeeddadeydu ma ahan in aan qof ama qabiil farta ku fiiqo. Waxaan rabaa in aan xog la wadaago ummadda Soomaaliyeed si ay gacan uga geysato tilmaamidda baaritaanka wixii dhacay. Iyo si ay wax uun ugu biirso fahamka taariikhda dhow ee Soomaaliya. Waxaa kale oo aan uga dan leeyahay in ay qayb ka noqoto wax barasho horseedda in mustaqblka ay dadkeennu ka fogaadaan taas oo kale iyo xad gudub kasta oo aadane.
Ugu dabeyn waxaan uga dan leeyahay in aan anigu isku daweeyo. Ugu yaraan in aan isku qanciyo in aan billaabay in aan guto waajibkeyga ah in si sax ah loo fahmo waxa dhacay inta aan goobjoogga u ahaa.
Waa Magaalo mareysa heer niyad jab ah. Dadku indhaha uun kaa eegayo. Qof kuu xog warrameya ay aad u adag tahay in aad aragto. Farxad iyo furfurnaan la’aanta magaaladu waa mugdi ka daahaya in aad magaalo dareento.
Waan xusuustaa habeen aan aniga iyo nin ajnebi ahi la kulannay. Aniga oo hor fadhiya aayan ka fekerayay war ninka sidaan u deggan ee sidaan u tasbiixsanaya iyo sidee isu qaban karaan xadgudubyada laga sheegayo?
Saldhigga booliiska ayaa magaalada ku dhex yaalla. Marmar baan Magaalada ku arkaa booliiska dharka ciidanka lebbisan oo lugeynaya ama baabuurtooda ku jooga. Xiriir badani nama dhex marin Booliiska iyo Taliyihiisaba.
Markii aan u tegey ee aan in wadahadalnay Taliye-ku-xgeenka, waxaan ka dareemay in uu ogaa in aanuu qiil haysan. Markaa aad isugmaan dayin in aan fahamsiiyo in Soomaaliya ay mid keliya tahay, Qofkan ajnebiga ahina uu ka soo degey Muqdisho. Isla visihii uu dalka ku soo galayna uu haysto. Waxa keliya oo isagu ku leeyahayna ay tahay hubin in ay waraaqahaas haystaan. Keliya waxaan tusay in aan taas fahamsan nahay wax ka sokeeya oo aan aqbali karnaana aanay jirin.
Waxaan ka warTaxanaha ku soo qaadi doonaa arrimo aad u culus oo uu Taliye Ku Xigeenka NSS-ta Berbera igala hadlay oo qaarkood ay ka mid yihiin taariikhda Berbera ee xilligaas.
Taliyaha Booliisku wuxuu ahaa nin dhallinyar oo af gaaban. Isaga iyo Guddoomiyaha Degmada ma xusuusto wada shaqeyn na dhex martay.
Berbera waxay ahayd magaalo ay colaaddu dhan walba u saameysay. Laakiin qofka sii jooga magaalada una dhug yeesha ayaa dareemi karay in dagaal silloon uu ka socdo magaalada sida aad ku arki doonto Qaybaha kale ee Taxanahan.